कृष्णहरिले रुँदै भने- नेपाल सरकार मूर्दावाद ! नेपाल सरकार चोर हो ! – Tourism News Portal of Nepal
१७ कात्तिक, काठमाडौं । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपालको तीन दिने भ्रमणका लागि दिल्ली विमानस्थलबाट उड्ने तयारीमै थिए । उनी काठमाडौं ओर्लिइसकेकै थिएनन् ।
कार्की एक घण्टापछि रगत बोकेर जाँदा डाक्टरले ढीला गर्नुभयो, बचाउन सकिएन भन्ने जवाफ दिएको भए ? यसमा मुख्य दोषी को हुन्छ सरकार ?साभार अनलाईनखबर